Mas’uuliyiin lagu helay musuq-maasuq oo la xukumay – news
Mas’uuliyiin lagu helay musuq-maasuq oo la xukumay
Maxkamadda ayaa sheegtay in 5 kamid ah 9-ka qof ee lasoo eedeeyay la sii daayay, kadib markii lagu waayay kiiska musuq-maasuqa,
MUQDISHO, Soomaaliya - Mas'uuliyiin sare oo katirsan Wasaaradda Caafimaadka Dowladda ayaa maanta lagu riday xukuno kala duwan, kadib markii lagu soo eedeeyay musuq-maasuq ay ku sameeyeen hantida dadweynaha.
Ragga la xukumay ayaa waxay kala ahaayeen sida sii socoto:
1: Cabdullaahi Xaashi Cali, oo ahaa Agaasimihii Wasaaradda Caafimaadka waxaana lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax ah $2,366 oo Dollar iyo inuusan hadda kadib qaban karin Xafiis Dowladeed.
2: Maxamuud Buule Maxamuud, Agaasimaha Waaxda Maamulka & Maaliyadda ee Wasaaradda Caafimaadka waxaa lagu xukumay 18 sano oo xabsi ah iyo ganaaxa $2,366 oo Dollar iyo iyo inuusan hadda kadib qaban karin Xafiis Dowladeed.
3: Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa Madaxa Xisaabadka ee mashruuca wacyigelinta Caafimaadka ee Wasaaradda Caafimaadka waxaa lagu xukumay 12 sano oo Xabsi ah ah iyo ganaaxa $2,366 oo Dollar iyo inuusan hadda kadib qaban karin Xafiis Dowladeed.
4: Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa Madaxa mashruuca mallaariyada iyo HIV/AIDs ee Wasaaradda Caafimaadka waxaa lagu xukumay 3 Sano oo Xabsi ah iyo 1,183 iyo iyo inuusan hadda kadib qaban karin Xafiis Dowladeed.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa amartay in la siidaayo 5 kale oo kamid ah Mas’uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, kuwaasoo ay sheegtay in dambi lagu waayay.
Rag kiis kufsi ah u xirnaa oo lasii daayay
Warar 3 September 2020 19:52
Aabe Wiilkiisa ku dilay Jowhar
Warar 30 August 2020 23:54